Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Nzuzo, Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Na-ekpo ọkụ - Histar
Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Na-ekpo ọkụ, dị ka aha ha na-egosi, a na-eji ya ebe okpomọkụ na-arụ ọrụ nke ngwá ọrụ ahụ nwere ike iru ọkwa ebe iguzogide nro, ịlele ọkụ na ujo dị mkpa, Ọ nwere nguzogide ọkụ dị elu na nkwụsị na-ajụ ọkara, Mgbaghara na ime ka obi sie ike adịghị ngwa
AKWelsKWỌ AKW steKWỌ AKW SPKWỌ AH to ka egosiputa ikike ha iguzogide nro na ogo dị elu ya mere na-ejigide njedebe mbelata mgbe ọnyụ dị arọ ma ọsọ ọsọ dị elu. Ha bụ ndị a kasị alloyed niile nke ngwá ọrụ ígwè ụdị.
ỌRE ígwè na-enwekarị obere carbon-ihe dị ka 0.36 ruo 0.40% na chromium na nickel bụ isi ihe ndị nwere alloying. Njirimara ndị a na-eme ka ihe ndị a bụrụ ihe nchacha oke.
APPLiations: Milled Flat bar used for Punch ebu, mma, ịghasa ebu, Chinaward ebu. Uru: Usoro usoro a na-ebelata ọnụahịa mmepụta ma melite arụmọrụ maka nrụpụta
Anyị nwere ike na-ezuru ngwaahịa AS
Gburugburu Ogwe, Bgbọ mmiri Ogwe, nkanka, ígwè mpempe akwụkwọ, gbawaranụ flat Ogwe SEMI-Emechara Blank na rụchaa ngwaọrụ.
Shanghai Histar Metal Co., Ltd e guzobere na 2003, Ọ na-elekwasị anya na ahịa nke ngwá ọrụ na ebu ígwè. Ọ na-eto ngwa ngwa dabere na ụdị ngwa ọrụ na ebu dị iche iche, ezigbo mma, ọnụahịa kwesịrị ekwesị yana ọrụ ka mma. Ka ọ dị ugbu a, eresịla ngwa ọrụ ika na ngwa ebu ihe karịrị mba iri anọ na mpaghara mpaghara ofesi, ma nyekwa ụlọ ọrụ ndị mba ofesi karịrị 100 ọrụ dị mma.
1. Ike iji nweta ọkwa na nha dị iche iche
2.Okike iji hazie ngwaahịa dika ochicho
3.Ikike inye akara / ogo pụrụ iche dị ka mkpa.
4.Ozi oge nke ihe omuma.
5. Nye nkwado ndabere.
Ọ baara ndị ahịa ahụ uru
Ọnụ ego mpi
Kwụsie ike na ọnụahịa
Ekwadoro ma nye ya oge
Mgbanwe maka nhazi / iji ihe
Nye nkwado ọrụaka
Tct okirikiri Hụrụ Agụba N'ihi Metal, Tct okirikiri hụrụ UM UBARA, Tct okirikiri Hụrụ Agụba, Hss M35 okirikiri hụrụ pupụtara, Hss M2 okirikiri hụrụ pupụtara, Hot Work Ngwá Ọrụ Steel gbapụtara Ewepụghị Ogwe,